Amaphupho ngentuthwane | AMAPHUPHO
By info on July 3, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ubona izintuthwane kusho ukuthi uyovuzwa ngokuzikhandla kwakho ngemicebo kanye nendlu enkulu ikakhulukazi uma uzibona ziqoqa udoti zizokwakha isidleke sazo. Uma uphupha iqulo lezintuthwane noma uphupha ngazo ubusuku bulandelana kubi futhi kusho ukuthi uzoba nezikhathi ezikhathazayo emndenini wakho.
Amaphupho ngomcimbi womshado
3 Responses to Amaphupho ngentuthwane
Nonhlanhla July 3, 2016 at 4:02 pm #
Uma uphupha ubhukuda.iphinde uphuphe inja izidlulela
Lindiwe July 12, 2016 at 2:53 pm #
Ngiphuphe umawam osashona nomalumekazi naye osashona kungathi bahlezi embhedeni. Umalumekaz uzobuza uMa ngebhodwe lesiZulu athi lalahleka, leli uMa athi ngelakhe (yena uMa) umalumekazi uthi elakhe. Khona lapho ngibone izintuthwane eceleni kukamalumekazi ngesikhathi elokhu egudluka esondela kuMa kuvele ezinye, ngizithuntuthe ngoba ngesaba ukuth zizomncinza. Ngicela ning’chushise ukuth kusho uk’thini lokhu
Thandekile December 19, 2017 at 10:34 am #
Ngiphuphe ingane yami yomfana idla ipetshisi kodwa laphuma izintuthane ezimnyama zagcwala nasemzimbeni kusho ukuthini